WAR DAG DAG AH: Wiilal soomaali ah oo lugu dilay magaaladda Stockholm ee dalka Iswiidhan | Somaliska
WAR DAG DAG AH: Wiilal soomaali ah oo lugu dilay magaaladda Stockholm ee dalka Iswiidhan
Abaarihii tobankii fiidnimo oo toban daqiio dhiman ayaa niman wejiyada soo xirtay waxaa ay weerar ku qaadeen maqaayad kafeega laga cabo oo ku taala xaafadda Rinkeby oo ah xaafad ay ajaanibta iyo soomaalida ku badan yihiin kuna taala waqooyi bari ee magaaladda Stockholm ee dalkaan Iswiidhan.
Booliska oo goobta gaaray ayaa sheegay in halkaasi ay ku dhinteen labbo wiil oo da’doodu lugu qiyaasay labaatan jirro, waloow eeysan tafaasiil badan ka bixin dhacdada halkaas ka dhacay. Raggan hubeeysan ayaa ku hubeeysnaa qoryaha atomaatika-da ah, waxaana ay tacshiirad huwiyeen dadkii meesha fadhiyey. Haweeney goob joog ah oo u warameeysay wargeyska Expressen ee Iswiidhan, ayaa sheegtay ineey maqashay labo qarax, markii ay balakoonka xaggeeda u soo dhaqaaqdayna aragtay nin ka ordaya goobta. In kastoo saxaafada Iswiidhan eeysan sheegin in ragga halkaas ku dhintay yihiin soomaali, hadana dad aan xirriiro la sameeynay ayaa noo xaqiijiyey in ay yihiin wiilal soomaali ah oo isla dhashay.
Wargeyska Aftonbladet oo isagana wax ka qoray arrintan ayaa sheegay in rag wejiyada soo xirtay ay ka baxdeen goobta markii ay xabadaha fureen ka dib. Dadweyne aad u careeysan oo iskugu soo baxay goobtii uu weerarka ka dhacay wax yar ka dib markii ay booliska soo gaareen goobta ayaa dadweynihii bilaabeen qaarkood ineey dhagax yeeyaan booliskii halkaas yimid. Booliska ayaa sheegay ineey baaritaan xoogan sameeynayaa iyo cidii ka dambeeysay.
Si kastaaba ahaatee dilalka u dhaxeeya kooxaha falal dembiyeedka ku leh ayaa mudooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa ahaayeen kuwo soo laa laabtay una dhaxeeyo kooxo is raadsanaya, hase ahate dhac dhacdan ayaa noqoneysa mid ugu horeeysay ee ka dhacda magaaladda Stockholm.
Wasiirka Isdhexgalka oo xafiiskiisa u soo raray xaafada Soomaalida Rinkeby
Inalilaah wa inaa ilaah rajacuun. Waa wax aad iyo aad logo naxo o murugoo leeh walaahi gerida waa xaaq laakiin waa mid aad u kulul taano kaale. Waxaan ilaah uga baryayaa inu wiilshaan naxariis tiisa galiyoo waalidki dhalayna samiir iyo imaan waasac ah Allah siyoo insha Allah. Ina lilaah waina ilaah rajacuun
Inalihaah wan in Allah raajun runtii waaa mudanahay Somalia in dunid dacaladed ayay kule intaan waaayo dad iyga heshin waa cid kale ma heshiniyaan
Sadia Abbulaahi says:
Inalilaahi waina ileyhi rajicuun
December 4, 2016 at 19:35
horta waxa leyahay wilasha allaha u naxariisto walidkana samir iyo imaan allaha kasiiyo waa dhacdo nawada taabatay hadaan nahay somalida dagan wadankan sweden.xafadan rinkyby waxey noqotay xaafad xafadah syrriya cml ah nolashana wax iska caadi ah ayeeba ka noqotay wax kasto dhaco dadku waxa uun kahadla inta arintu qoyanatahy anigu waxan dhihi laha am sory daawo uma ahan dadka ee wa in eey sugin cid kale waxa lahadlaya hooyoyinka heesta caruurta ee ku nool xafadaan wa ineey palen A IYO plen B samestaan hadii aad aragato in caruurtada nolshoodu in eey faraha ka baxeeso ama aadan mareen karin waa in aad adiga walid ahaan ad kenta qorsho kasto ood ku bad badin karto caruurtaada xata hadey noqoto inaad ka badalto xafad ood tuulo dagto ama aad la qaxdo caruurtada ood aado meel kasto oo dhaanto ama aa is leedahay wa maamuli karta caruurtada